Kooxda kaliya ee England ka dhisan ee uu Aguero ku biiri karo oo la ogaaday… (Chelsea, Arsenal mise koox kale?) – Gool FM
Kooxda kaliya ee England ka dhisan ee uu Aguero ku biiri karo oo la ogaaday… (Chelsea, Arsenal mise koox kale?)
Ahmed Nur April 8, 2021
(Manchester) 08 Abril 2021. Sida la wada ogyahay, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa xiddigeeda Sergio Aguero u fasaxday inuu ku biiro kooxdii uu doono marka uu dhammaado heshiiskiisa oo dhici doona dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Sidaas darteed, waxaa adeeggiisa daneynaya kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub, iyadoo kooxaha England ka dhisan ee Chelsea iyo Arsenal ay qayb ka yihiin kooxaha xiiseynaya laacibka reer Argentina.
Hase ahaatee, warar cusub oo ka imaanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in Aguero uu daneynayo ku biirista kooxda Tottenham Hotspur haddii uu sii joogayo horyaalka Premier League.
Jariiradda Telegraph ee kasoo baxda England ayaa ku warrameysa inuu 32-jirkan daneynayo suuro galnimada ku biirista kooxda Spurs, xilli horraan Sportsmail ay baahisay in Thomas Tuchel uu doonayo inuu laacibka usoo xero geliyo Chelsea.
Geesta kale, naadiga Waqooyiga London ka dhisan ayaa lagu soo warramayaa inay xagaagan suuqa ka baadi goobeyso weeraryahan heer sare ah, maadaama loo badinayo inay lumin karaan xiddigooda Harry Kane.
Sidaas darteed, Spurs ayaa fursad u aragta inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah weeraryahannadii ugu wanaagsanaa taariikhda horyaalka Premier League, kaasoo doonaya inuu xilli ciyaareedka dambe u ciyaaro naadi ka dhisan Ingiriiska oo ka qayb galeysa Champions League.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jose Mourinho ayaa hadda ku jirta kaalinta lixaad ee kala sarreynta horyaalka iyagoo uruursaday 49 dhibcood kaddib 30 kulan oo ay ciyaareen, waxaana ay saddex dhibcood ka dambeeyaan kooxda kaalinta afaraad ku jirta ee West Ham United, taasoo suuro gelin karta inay ku dhammeystaan boosaska loogu soo baxo Champions League.
Man United, Arsenal, Roma iyo guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartanka Europa League
Liverpool iyo Chelsea oo ku dagaallamaya saxiixa laacib khadka dhexe ka ciyaara